नेप्से इतिहासकै उच्च ११९१.२२ विन्दुमा,सबै समुहमा वृद्धि, कारोबार ६६ करोड ७७ लाख रुपैया
बुद्धबार, भाद्र २, २०७२ साल,
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्से परिसूचक बुधबार दिउँसो अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च ११९१ दशवमल २२ विन्दुमा पुगेको छ । बजार तीन बजे बन्द हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक लगायत वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने नीति ल्याएपछि बजार बुलिस ट्रेन्डमा गएको हो। वाणिज्य बैंकले पूँजी बढाउनका लागि बोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्ने आशाका कारण बजारमा खरिदको चाप बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। निरन्तर उकाले लागिरहेके बजारलाइ हिजो राष्ट्रबैंकले बेनस शेयरमात्रै जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएपछि बजार आज अझ रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान निर्माणको सुनिश्चितता बढेपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढेको देखिन्छ । सेमबारदेखि सबै बैंकका सेयर डिम्याट सिस्टमबाट मात्र कारेबार हुन थालेपछि बैंकिङ समुहका शेयरको आपूर्तीमा कमी तथा मागमा बृद्धि भएको छ । जसले गर्दा बैंकिङ समुहका शेयरको मूल्य बढ्दा समग्र नेप्से परिसूचक पनि बढेको हो । तर विष्लेशकहरू यो बृद्धि लामो समयसम्म टिकाउ हुने आधार नभएको बताउँछन्।
बुधवार सेयर बजारमा ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ। कुल १ सय ३९ कम्पनीको १२ लाख २३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
बुधवार सम्पूर्ण समूहहरु बढेका छन्। यस दिन ठूलो समूह बैंकिङमा ३३.३४ अंकको बृद्धि भयो। त्यस्तै होटल समूहमा १६६. ४७, विकास बैंक समूहमा ८.४७, हाइड्रोपावर समूहमा ५.७ , फाइनान्स समूहमा ७, बिमा समूहमा ९९. ४८, उत्पादन समूहमा २५. ९४ र अन्य समूहमा ४२. २८ अंकको बृद्धि भएको छ।
कम्पनीगत रुपमा हेर्दा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै रकमको सेयर कारोवार भएको छ। उसको ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोवार भएको छ। त्यस्तै संस्थापक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३ करोड ४७ लाख, सिटिजन्स बैंकको ३ करोड ३९ लाख, चिलिमे हाइड्रोको ३ करोड १५ लाख तथा प्रभु बैंकको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोवार भयो।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र ओरियन्ट होटलका सेयर लगानीकर्ताले १० प्रतिशत सेयर नाफा कमाए । युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स बैंक, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताले पनि ९ प्रतिशत बढी सेयर नाफा कमाए।
गत वर्ष नेप्से १ हजार नाघेको थियो। सोही समयमा राष्ट्र बैंकले ’हेल्ड फर ट्रेडिङ’ लाई एक प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति ल्याएपछि नेप्से आरोलो लागेको थियो। कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय तथा बैंकहरुसँग रहेको अत्यधिक तरलताले सुलभ ऋण पाउँदाको असरका कारणले पनि बजारले उकालो गति लिएको हो। नेप्से २०६५ भदौ १५ गते सबैभन्दा उच्च ११ सय ७५.३८ मा पुगेको थियो। २०६८ असार १ गते सबैभन्दा कम २ सय ९२.३१ विन्दूमा ओर्लिएको थियो।